Global Voices teny Malagasy » Nanomboka Taminà Sariitatra ny Tantaram-Pitiavana LEGO tao Hongria · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Jona 2017 16:08 GMT 1	 · Mpanoratra Filip Stojanovski Nandika avylavitra
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Hongria, Fanatanjahantena, Hehy, Mediam-bahoaka, Sarimihetsika, Toekarena sy Fandraharahàna
Pikantsary avy amin'ny saiitatra iray mampiseho lalao LEGO tamin'ny 1986 novokarina tao Hongria.
Ampolo taona maro talohan'ny nahatongavan'ny lahatsary LEGO ho lasa malaza erantany, nisy studio Kaoministra Hongroà iray nampiasa ireo biriky LEGO hamokarana sariitatra avo kalitao.
Tamin'ny 1986, ny Studio Vianco ao Budapest dia namoaka andianà lahatsary fohy niisa fito nampiasàna ireo endrika narafitra avy amin'ireo biriky sy nanomezana laro mahatsikaiky ho an'ny lalao hockey, olona mikorisa aminà skate, mpilalao soccer sy fanatajahantena hafa. Araka ny gazetiboky MAKE , io no “tranainy indrindra amin'ireo famoahana ofisialy ny LEGO stop-motion hatramin'izay.”
Tamin'izany fotoana izany, ireny sariitatra ireny dia nalefan'ny fahitalavitra nasionaly nanerana an'i Eoropa. Natonta tamin'ny endrika horonana VHS ihany koa izy ireny, izay navadik'ireo mpankafy ho amin'ny endrika dizitaly taty aoriana, nahafahan'ireo sariitatra nisitraka fanjohiana marintoerana tao amin'nhy Youtube.
Ireo mpilalao rehetra ao anatin'ireny sariitatra ireny dia namboarina avy amin'ireo biriky Lego “mahazatra”, ary tsy manasongadina sarivongana na iray aza. Asehon'izy ireny ny faizana mamorona ananan'ny Lego miainga avy amin'ny dika tena faran'izay tsotra aminy, ary ampian'ny fanazavana ny antony mahatonga ilay marika ho zavatra iray tsy afaka misaraka amin'ny fahazazàn'ireo olona an-tapitrisa manerana izao tontolo izao.
Nitohy niasa hatrany ny Studio Vianco taorian'ny nivoahan'ireo lahatsary fohy, ary araka ny voalaza dia nandray anjara tamin'ny famokarana ny lahatsary Felix ilay sàka  ny IMDB tamin'ny 1988.
LEGO tao ambadiky ny ‘Lambam-baravarana Vy’
Tato anatin'ny taona vitsivitsy, nahazo fanohanana ara-bola avy amin'ny governemanta Hongroà ny LEGO, vola nomen'ireo mpamatsy vola mivantana avy any ivelany. Tamin'ny 2006, ny hamoràn'ny hery mpamokatra  tao amin'ny firenena sy ny toerana stratejika ara-jeografia misy azy dia naharesy lahatra ilay orinasa Danoà hanofa toeram-pamokarana iray tany Atsinanan'ny tanànan'i Nyíregyháza . Famorakana
natombony amin'ny 2008 .
Tamin'ny 2014, natsangan'ny Hongroà ny tilikambo LEGO avo indrindra teto an-tany,  tao Budapest, nanana haavo 34.76 metatra, zavabita tsara indrindra rava herintaona taty aoriana rehefa tonga ireo andianà Italiana mpanorina , izay nahavitra niezaka nanatratra ny 35.05 m.
Iny taona iny ihany indray dia nomontsanin'ny Hongroà ilay zavabita tsara indrindra tamin'ny haavon'ny tilikambo, nanokatra ozinina iray vaovao tao  Nyíregyháza ny LEGO, izay notokanan'ny praiminisitra Viktor Orban. Tamin'ny 2015 ny LEGO dia nanambara  fa ho ataony avo roa heny ny haben'io ozinina io, mba hahafahana mamaly ireo tinady ambony dia ambony  amin'ny vokatra avy ao aminy. Fanohanana ara-bola  4,4 lavitrisa ‘forints‘ Hongroà (17,5 tapitrisa dolara) no nanoanana ilay fanitàrana, avy amin'ny governemanta Hongroà .
Tamin'ny Febroary teo i Ferenc Kovács, Ben'ny Tanànan'i Nyíregyháza, dia nanaitra ny hetahetan'ireo mpankafy LEGO tao an-toerana rehefa nanambara  fa mety ho tontosa amin'ny 2020 ny fametrahana Legoland Discovery Center  ao an-tanàna. Saingy vetivety foana ireo fampanantenana natao hanintonana olona dia notsenain'ny hadisoam-panantenana, isan'ireny ny Merlin Entertainments, ilay mpandraharaha tompon'ny lisansan'ny LEGO, izay nilaza  hoe tsy manana vinavina hametraka ivontoerana tahaka izany izy.
Raha misy ampahanà fahamarinana kely ao anatin'izay nambaran'ny ben'ny tanàna — izay nekeny hatreto dia ny fisian'ny tolokevitra nomanina mba hatolotra hodinihan'ny Merlin — Io no mety ho voalohany amin'ny Legoland Discovery Center any Eoropa Atsinanana sy Afovoany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/06/12/101804/
 gazetiboky MAKE: http://makezine.com/2014/02/08/david-paganos-brickfilms-picks/
 Felix ilay sàka: http://www.imdb.com/title/tt0259308/
 hamoràn'ny hery mpamokatra: https://www.forbes.com/sites/karinatahiliani/2012/02/10/lego-upping-its-stake-in-hungary-as-other-foreign-investors-fold/#6b9858271d40
 natombony amin'ny 2008: http://www.nyiregyhaziiparipark.hu/en/lego
 tilikambo LEGO avo indrindra teto an-tany,: http://edition.cnn.com/2014/05/27/travel/hungary-lego-tower/index.html
 Italiana mpanorina: http://www.guinnessworldrecords.com/news/2015/7/lego-italia-builds-colossal-plastic-brick-structure-that-towers-past-previous-rec-386883
 nanokatra ozinina iray vaovao tao: https://dailynewshungary.com/the-inauguration-of-new-lego-factory-in-nyiregyhaza/
 dia nanambara: https://www.lego.com/en-us/aboutus/news-room/2016/january/lego-factory-in-hungary-to-double-in-size
 ireo tinady ambony dia ambony: http://fortune.com/2016/01/15/lego-doubling-production-hungary/
 Fanohanana ara-bola: http://www.incentivesmonitor.com/featured_deal/Danish-toymaker-Lego-invests-121m-in-Hungary
 fametrahana Legoland Discovery Center: https://www.legolanddiscoverycenter.com/